We.com.mm - နိုင်ငံခြားသားတွေမနာလိုဖြစ်ရတဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ထူးခြားချက် (၉) ချက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်အများစုက နှစ်သက်ကြပါတယ်...။ သူတို့လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိတဲ့ အလေ့အထတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အားကျမှုကို ခံနေတာပါ...။
ဘယ်လိုသူမတူတဲ့ အားသာချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ..?
၁၉၄၅ မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျူးကျော်အုပ်ချုပ်မှုကနေ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူရော အစိုးရကပါ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးနောက် ၊ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်က နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ...။ ဒါဆို တစ်ခုချင်းကြည့်လိုက်ရအောင်...!
၁. အရက်ကို ဘယ်နေရာမှာမဆို ဝယ်လို့ရတယ် သောက်လို့ရတယ်
နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အရက်ဝယ်ရတာ တောင်ကိုရီးယားမှာလောက် လွတ်လပ်မယ်မထင်ပါဘူး... ။
ကုန်စုံဆိုင်တိုင်းမှာလိုလို ဆိုဂျူကို လိုချင်သလောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်...။
ဆိုဂျူတစ်ပုလင်းကို မြန်မာငွေ ၁၃၀၀ လောက်ကစပြီး ကြိုက်သလောက်ဝယ်သောက်လို့ရပါတယ်တဲ့...။
အရက်ဝယ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ... ဘယ်နေရာမှာသွားသောက်ရမလဲဆိုတာက စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး...။
လမ်းမှာ ရထားပေါ်မှာ တံတားပေါ်မှာ စသဖြင့် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်သောက်လို့ရပါတယ်...။
၂. ညဖက်လျှောက်သွားလည်း လုံခြုံမှုရှိတယ်
တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သွားသွား ဘာစားစား စိတ်ပူစရာမလိုဘူး... စားသောက်ဆိုင် တော်တော်များများကလည်း သန်းခေါင်ကျော်အထိဖွင့်တယ်...။ မိုးလင်းထိ လျှောက်သွားနေရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့...။
၃. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေအပေါ်မှာ စားလို့သောက်လို့ရတယ်
အာရှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများက ရထားပေါ်တွေ ဘက်စ်ကားပေါ်တွေမှာ စားသောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားတယ်...။ ကိုရီးယားမှာတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး... ။ဘယ်ယာဉ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်စားလို့ရတယ်... အဖမ်းခံရမှာစိတ်မပူပါနဲ့... စည်းကမ်းရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့....။
၄. အစားအသောက်က ဘယ်အချိန်မဆို သင့်ရှေ့ရောက်လာမယ်
တောင်ကိုရီးယားက စားသောက်ဆိုင်တွေအားလုံးကို အိမ်အထိလာပို့ခိုင်းလို့ရတယ်...။
ပန်းခြံ၊ အလုပ်ခွင်ထဲတင်မကဘူး သင်ရောက်နေတဲ့နေရာကို လာပို့ပေးမှာပါ...။
၅. အွန်လိုင်းရှောပင်းတွေရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု
အွန်လိုင်းရှောပင်းတွေကနေ ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာပြီဆိုရင် အနည်းဆုံး တစ်နာရီအတွင်းကနေ အများဆုံး တစ်ရက်မကျော်ပဲ သင့်ဆီအရောက်လာပို့ပေးပါတယ်...။ ပစ္စည်းဘယ်လောက်မှာမှာ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်...။
၆. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံးအင်တာနက်က ကိုရီးယားမှာရှိတယ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးပါတဲ့...။
ကော်ဖီဆိုင်တွေ ရှောပင်းမောလ်တွေမှာ သုံးလို့ရတဲ့ အင်တာနက်ကတောင် တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ အမြန်ဆုံးဆိုတာထက် ပိုမြန်နေမှာပါ....။
၇. ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့လို့ရတယ်
ကော်ဖီဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် သန့်စင်ခန်းခဏ ထသွားမယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းတွေအကုန်ယူသွားစရာမလိုပါဘူး...။
အခိုးခံရမှာလည်းမဟုတ်သလို ဘယ်သူမှလည်း စိတ်မဝင်စားပါဘူး...။
လက်တော့တွေ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ စိတ်ချလက်ချထားခဲ့ကြပါတယ်တဲ့...။
၈. ဝန်ဆောင်ခတွေ အခွန်တွေ ထည့်တွက်စရာမလိုဘူး
ဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ် သူပြောထားတဲ့ဈေးအတိုင်းသာ ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့၊ အခွန်တွေ ဝန်ဆောင်ခတွေ ထည့်မပေါင်းပါဘူး..။ တစ်ခါတည်း ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းမှာထည့်တွက်ထားတာဖြစ်လို့ စိတ်ချလက်ချ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်...။
၉. အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအရှိဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်...။ လမ်းခရီး မကျွမ်းကျင်တာတွေအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပဲနဲ့ ရထားပေါ်တွေမှာ ဘယ်လောက်တောင်သန့်ရှင်းလဲဆိုရင် အိမ်မပြန်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်စေမှာပါတဲ့...။
ကမ္ဘာပေါ်က ဟန်ချက်ညီကျောက်တုံးတွေရှိတဲ့နေရာ (၆)ခု
၁၉၅၅ မှာ စတင်ပျံသန်းခဲ့ပြီး ၃၇ နှစ်ကြာမှ မြေပြင်ပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်
ဟန်းနီးမွန်းထွက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာ (5) ခု
သင့်ကို ရယ်မောစေမယ့် ခရီးသွားတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများ